A1nepal.comतिज विशेष कार्यक्रम गर्दै एनआरएनए-एनसिसी इजरायल, के के निर्णय भए पहिलो बैठकबाट ? - A1nepal.com
२०७८ भाद्र १, मा प्रकाशित
यस बर्षको नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज एनआरएनए-एनसिसीले भव्य रुपमा मनाउने तयारी शुरु गरेको छ ।
एनआरएनए-एनसिसी इजरायलको गत शनिवार सम्पन्न नयाँ कार्यसमितिको स्वागत तथा पुरानो कार्यसमितिको विदाईको लागि आयोजित “स्वागत तथा विदाई” कार्यक्रम पश्चात कार्यक्रम हलमा बसेको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले कोभिड महामारीका कारण गत साल वृहत रुपमा तीज कार्यक्रमको आयोजना गर्न नसकिए पनि यस बर्ष इजरायल सरकारबाट जारी सुरक्षा सजगतालाई अवलम्वन गर्दै आगामी १० सेप्टेम्वर शुक्रवार तीज कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको संघका महासचिव कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीले इजरायलमा कोरोना संक्रमितको संख्या वढ्दो देखिएको र कार्यक्रमको मितिमा लक डाउन हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यदि त्यसो भएमा अर्को मितिमा भएपनि कार्यक्रम गरिने बताए ।
निशुल्क दरको समेत व्यवस्था रहने गरी मनाउन गइरहेको तिज विशेष कार्यक्रमको स्थान र समय भने संघको आगामी बैठकपछि मात्र सार्वजनिक गरिने महासचिव भण्डारीले बताए ।
त्यस्तै समितिको पहिलो बैठकले इजरायलमा रहेका नेपाली समुदायको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली राजदूतावासमा एनआरएनएको डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले रिक्त पदपूर्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरेको छ । समितिको संरक्षकमा सुवास खरेल र दिपक प्रसाद ओलीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ भने समितिको रिक्त सहसचिवमा सदस्यमा निर्वाचित रण कुमारी गल्देनलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै सह-कोषाध्यक्षमा लुमा साङदेम्वालाई मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै रिक्त युवा संयोजकमा अनन्त कुमार थापालाई मनोनयन गरेको छ भने प्रवक्ताको जिम्मेवारी सदस्यमा निर्वाचित तेज व. गुरुङलाई दिइएको संघले जनाएको छ ।
बैठकले बैदेशिक लगानी प्रवर्धनको निम्ती ठोस रुपमा पहलकदमी गर्ने गरी योजमा अगाडी वढाउने, नेपाल र इजरायलविचमा व्यापार प्रवर्धनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली राजदूतावास संगको समन्वयमा योजना तय गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि गरिएको संघका महासचिव कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए ।